Ukuphupha Ngelindle Lenja: 7 Iintsingiselo zePoop!
kuqala » Amaphupha » ukuphupha ilindle lezinja
Uyazi kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nelindle lenja? Abantu abaninzi banomkhuba wokuba namaphupha angaqhelekanga, kodwa abayazi intsingiselo yawo.
Eli lelinye lawona maphupha angaqhelekanga kwaye anqabile wethu portal engaqondakaliyo, kodwa inyaniso kukuba nayo inentsingiselo!
Umele ukuba uvile ukuba ukunyathela ilindle kuluphawu lwethamsanqa kwaye emva kokuba oku kwenzeke kuwe, kukho into entle eza kwenzeka ebomini bakho, andithi?
Kwaye ngaba ukuphupha ngaye yinto enye?
Ngokomgaqo ewe kwaye ulungele kuba kukho utshintsho oluthile ebomini bakho oluzayo, kwaye alubi kakhulu!
Ukuvavanya ngokuchanekileyo ukuba lithetha ukuthini iphupha, kufuneka sazi ukuba yintoni enye yezinto ezikhoyo ephupheni.
Okokuqala kufuneka ucinge malunga nokuba inja yayikhona ephupheni. Ngaba?
Ngoko ke kufuneka sibone ukuba inja ithetha ukuthini kwaye ithetha ukuthini ilindle elishiywe nguye.
Iyintoni intsingiselo yenja emaphupheni?
Ukuba inja yayikhona ephupheni lakho, kubalulekile ukwazi intsingiselo yayo.
Izinja zihlala zinxulunyaniswa nobuhlobo obukhulu, amaphupha intsingiselo, kunye nokudibana okukhulu.
Ukuba unenja ekhoyo ephupheni lakho kusenokwenzeka ukuba sele uza kuba nabahlobo abatsha nokuba obu buhlobo buyinyaniso.
Ayibobuhlobo nje obunokuthandwa ebomini bakho...
Usenokuba sele usondelelene nabanye abantu, unokuba ngumhlobo notshaba okanye umntu ongazange ucinge ngaye.
Ekuphela kwesiqinisekiso esinokukunika sona kukuba uya kudala ubuhlobo obutsha kungekudala kwaye ubuhlobo buya kuba namaqhina aqinileyo nahlala ehleli.
Iyintoni intsingiselo yombala omdaka
Izinja zezinja zimdaka, ngoko kubalulekile ukuvavanya ukubaluleka kwalo mbala kumaphupha ethu.
Imibala ehamba phambili ephupheni ingathetha kakhulu ngayo, yingakho kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba umbala omdaka uthetha ntoni ephupheni.
Umbala omdaka unxulumene indalo, indlela yokuphila enempilo kunye nonxibelelwano phakathi kwabantu.
Isanxulunyaniswa ne utshintsho, ukuzola, intuthuzelo kunye nokuzinza kunye noxanduva.
Njengoko unokubona ngokuqhelekileyo umbala omhle esinokuphupha ngawo kwaye uthembisa izinto ezintle ezizayo!
Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nelindle lenja?
Ngoku masifike apho sifuna ukuba khona...
Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nelindle lenja? Ngethamsanqa kuthetha okulungileyo kuphela kwaye inxulunyaniswa nokulungileyo umqondiso!
Inxulunyaniswa neenguqulelo ezintsha kubomi bethu obuzayo.
Ukuba kukho into eza kwenzeka, enjengokulinda imvume yetyala, loo khredithi iya kuphendulwa kwaye iya kuvunywa!
Ukuphupha indle yezinja luphawu lwethamsanqa, lucky kakhulu!
Ubomi bakho buya kuzaliswa zizinto ezilungileyo kwaye uya kuba nethamsanqa kuyo yonke into oyenzayo.
Kukho nabo bakhangela amanani ethamsanqa xa bephupha ilindle lezinja, njengoko ilelona xesha libalaseleyo lokudlala nokuphumelela.
Eli phupha lisanxibelelene ne ithamsanqa kubudlelwane, kokubini kubudlelwane obukhoyo kunye nolutsha.
Ukuba udibene nomntu kwaye awazi ukuba kuya kusebenza, oku kubonisa ngokucacileyo ukuba kuya kuba, kuya kusebenza kwaye kuya kuba nobudlelwane obuqinileyo kunye obupheleleyo kuwe.
Ukuba unobudlelwane obungahambi kakuhle kakhulu, kunokuba yinto yokuguqula, ukuphupha ilindle lezinja itsala ithamsanqa kubudlelwane, enoba ngabothando, abosapho okanye bobuhlobo obunyulu.
Phupha malunga nelindle lenja kunye nekati
Xa ikati ikhona ephupheni, okanye ilindle layo, lithetha into enye kuphela... Ezinye iingxaki!
Njengoko ubonile ngaphambili, uya kuba nobudlelwane obutsha kwaye uya kuba nethamsanqa ebomini, kodwa njengoko ikati yayikhona, kusenokwenzeka ukuba kuya kufuneka ujongane nemingeni ethile ebomini de ufikelele kuloo luck.
Ngendlela ethe ngqo… Awuyi kuba nethamsanqa!
Kuya kubakho abantu abaya kungena endleleni yakho kwaye baya kuzama ukukunqanda ukuba uphile ulonwabo lwakho, kodwa abayi kukwazi ngenxa yokuba inhlanhla yakho kunye nokuzimisela kwakho kuya kuphumelela yonke into.
Iikati ngamanye amaxesha zifuzisela amashwa, kodwa ngethamsanqa, njengoko nawe uphuphe ilindle lezinja, akufuneki ube nexhala.
Phupha malunga nelindle lenja eninzi
Sele uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nendle yezinja, kodwa ngaba uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuba zininzi?
Ngethamsanqa sineendaba ezingcono kuwe (ewe, eli nqaku liyinkuthazo yokwenyani, unethamsanqa)!
Okukhona ubona ilindle, kokukhona uba nethamsanqa.
Ukuba ukuphupha ilindle lenja kutsala ithamsanqa, ukuphupha ilindle elingakumbi kutsala ithamsanqa elingakumbi.
Eli thamsanqa lisebenza kuzo zonke iimeko, ezinje ngothando, imali, usapho kunye nobuhlobo.
Rhoqo iyasebenza nakwimpilo, into enkulu.
Ukuba ilindle kwakhona ikati musa ukukhathazeka, oko kuthetha nje ukuba kuya kubakho abantu abaninzi ngakumbi ukuzama ukuphepha impumelelo yakho kunye nolonwabo, kodwa uya kuhlala phezulu!
Ubambe ilindle lenja?
Ukuba ubambe ilindle lenja oku kuya kuba nentsingiselo eyahlukileyo ngokupheleleyo!
Lo nto ithetha ukuba ukwixesha elifanelekileyo lokwenza izigqibo ezibalulekileyo ebomini bakho, ukuba kukho izigqibo ekufuneka uzithathe kwaye awunaso isibindi sokuzenza, ungaqala ngoku.
Ezona zigqibo zinzima zezona zisenza soyike kakhulu kwaye soyike, kodwa inyaniso kukuba, kufuneka zenziwe ngokukhawuleza okanye kamva.
Esi sisilumkiso sokuba ixesha lilungile ukwenza oko, musa ukulibazisa.
Phupha ngokunyathela ilindle lezinja
Le ntsingiselo iya kufana kancinane nale ingasentla. Ufuna ukukubonisa ukuba kufuneka wenze into ethile ebomini bakho.
Kukho into obusoloko ufuna ukuyenza, kodwa awuzange ube nesibindi sokwenza oko. Ke, iphupha lifuna ukudlulisela kuwe ukuba lixesha lokuthatha umngcipheko kwaye wenze le nto ubuyifuna kakhulu kwixesha elidlulileyo.
Isenokuba luhambo, isibhengezo sothando, iprojekthi okanye notyalo-mali. Okuqinisekileyo kukuba kufuneka ukwenze oku ngeli xesha kuba lelona xesha lifanelekileyo lokwenza oko.
ukucoca ilindle lezinja
Ukuba uphuphe nje ukuba ucoca ilindle lenja okanye i-poop, yazi ukuba oku yinto entle kakhulu kwilizwe lamaphupha.
Iphupha lifuna ukudlulisela kuwe ukuba uya kukwazi ukucombulula ezinye iingxaki, kodwa uya kufuna umonde othile. Ke, ukuba ujongene nobunzima, zola kwaye ube nomonde kuba yonke into iya kutshabalala.
Ngoko ke, sinokukubona oku njengento enentsingiselo ebalaseleyo kubomi bethu!
Phupha malunga nenja ephuma emanzini
Ngaba inja ibizihlamba ngexesha lamaphupha akho? Ke, sineendaba ezimnandi kuwe, kuba le poop yenziwe yinja inentsingiselo entle kakhulu kubomi bethu!
Iphupha liza kukulumkisa ukuba amathuba amahle asondele. La mathuba aya kuba kwintsimi yobungcali kunye nezezimali.
Ke ngoko, unokulinda amathuba amatsha kwindawo yokusebenza kunye notyalo-mali. Ukukhumbula oku, eli phupha likwanophawu oluhle kakhulu kubomi bethu.
Kuya kufuneka ukuba uqaphele ngoku ukuba sihlalutya phantse onke amaphupha ethu kumdlalo wezilwanyana kunye namanani ethamsanqa.
Kule meko, sinokuthi ilindle yezilwanyana zizibonakaliso ezibalaseleyo zethamsanqa kwimidlalo kunye nelotho!
Ke, kuhleli kuthi ukuba sisebenzise elo thamsanqa. Sishiya uqikelelo olungezantsi ukuze ukwazi ukuzisebenzisa nanini na naphi na apho ufuna khona:
Kwakhona sebenzisa amanani ethamsanqa: 09, 17, 28, 29, 45
Sifuna ukukukhumbuza ukuba le ntsingiselo ibhekisa kuphela kwizitulo ezimdaka okanye imibala efanayo, njengomdaka omnyama/okhanyayo.
Kwimeko yezitulo ezibomvu inokuba nentsingiselo eyahlukileyo, kodwa siya kuyishiya enye inqaku njengoko singenaye nabani na ocela lo mbala.
Ngaba sele uyazi ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nelindle lenja? Nokuba zininzi kwaye kukho iikati kumxube?
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso, ungalibazisi ukubuza!
Amaphupha amahle. 🙂
phupha malunga nenyoka e-orenji
Phupha ngesigcawu soononkala
ukuphupha igazi lokuya exesheni
1 Iyintoni intsingiselo yenja emaphupheni?
2 Iyintoni intsingiselo yombala omdaka
3 Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga nelindle lenja?
3.1 Phupha malunga nelindle lenja kunye nekati
3.2 Phupha malunga nelindle lenja eninzi
3.3 Ubambe ilindle lenja?
3.4 Phupha ngokunyathela ilindle lezinja
3.5 ukucoca ilindle lezinja
3.6 Phupha malunga nenja ephuma emanzini
3.7 Intsingiselo kuMdlalo weZilwanyana
Nge-29 ka-Agasti ka-2018, 7: 01 pm
Ndiphuphe injana emhlophe etyebileyo isiza kufutshane yenza isixa esikhulu sezitulo, ezinkulu, eziqinileyo nezityheli kwaye zicace kakhulu. Ndandingakholelwa ukuba ilindle elingaka lingaphuma kwinjana. Emva koko waya kuhlamba kumlambo wamanzi acwengileyo nazolileyo. Kwaye kwafika inene elinentshebe ezimhlophe kunye naye kwakukho umalusi omkhulu waseJamani owandijonga cwaka.
NgoSeptemba 15, 2018, 11: 33 am
Ndiphuphe injana encinci kakhulu ebomvu...ndigula kwaye isenza ilindle eliluhlaza phezu kwam kwaye ebhokisini kukho ilindle lekati.
Ngaba ungandicacisela eli phupha...
NgoSeptemba 26, 2018, 1: 29 pm
Ndiphuphe intombi yam encinci ilele kwimfumba yelindle lenja yam kwaye kwilindle elikhulu ngathi ngabantu abadala, ndamcela ukuba aphume apho wajonga ilindle wawathatha wathi:NDISHIYE APHA MAMA NDIYENZA. NDIFUNA UKUHAMBA, ndiye ndazincama ndaxelela umyeni wam ukuba akafuni kuphuma apho, wandixelela ukuba wonyanyile msuse apho ndathi more uyayonwabela lonto, emva koko uyahamba ndabe ndinayo. ukucoca loo mfumba yekaka bendicaphuke kakhulu kufuneke ndicoce!!!